जापानमा जागिरे महिलालाई चश्मा लगाउन प्रतिबन्ध - Choicekhabar.com
जापानमा जागिरे महिलालाई चश्मा लगाउन प्रतिबन्ध
Choicekhabar । २०७६ मंसिर १०, मंगलवार ०७:११ मा प्रकाशित
एजेन्सी । जापानका केही कम्पनीले आफ्ना महिला कामदारलाई चश्मा लगाउन प्रतिबन्ध लगाएका छन्। चश्मा प्रतिबन्धको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
पुरुषका लागि बन्याे गर्भनिरोधक सुई : एक पटक लगाए १५ वर्ष सम्म ढुक्क
बियर खाएर ४६ दिनसम्म उपवास
विश्वप्रख्यात ३० व्यक्ति : ‘जाे बाल्यकालमा यस्ता थिए थाहाँ पाउनुहाेस
गर्भनिरोधक औषधि आउनुभन्दा पहिला : गोहीको मलदेखि निचोरिएको आधा कागतीसम्मको प्रयोग
देख्न साथ यसरी चिन्न सकिन्छ, नियमित यौन सम्पर्क गर्ने महिला
अनुसन्धानका लागि किन धेरै प्रयोग गरिन्छ मुसा ?
फोनमा कुरा गर्दा सबैभन्दा सुरुमा भनिने शव्द ‘हेल्लो’ को उत्पति कसरि भयाे ?
एक पुरुषको वीर्य विश्वभरका महिलालाई गर्भवती बनाउन काफी !